Shell Sheetka Kaabsalka Faaruqda ah
Yasin Gelatin wuxuu kaqeybqaataa API Guangzhou 2021
API China waa dawooyin dhamaystiran oo dawooyin iyo kiimikooyin ah oo lagu muujiyo warshadaha dawooyinka Shiinaha. In ka badan 40 sano oo khibrad ah Shiinaha, waxay u ahayd dabaaldeg caan ah dhammaan dhinacyada ku lugta leh suuqa dawooyinka Shiinaha. API Shiinaha iyo dhacdooyinkiisa 3-da ah ee la xiriira ...
Ayaa diirada saaraya wax soo saarka kolajka
Salaan wacan yaasiin. Maanta waxaan jeclaan lahayn inaan idinla wadaagno mid ka mid ah madaxdeena mr. Ling, sheekadiisa shaqsiyadeed ayaa na dhiirrigelisa oo naga dhigeysa inaan marwalba wada shaqeyno. Wuu kacaa goor hore wuxuuna shaqeeyaa maalin kasta, taas oo hal sano oo kaliya u qaadata inuu kuxigeen ka noqdo agaasimaha cilmi baarista ee qof caadi ah ...
Awoodaha Lagu Taageero Macaamiisheena
Aad baad ugu mahadsantahay kalsoonidaada iyo taageerada aad na siiso.waxaan ilaalin doonnaa awoodeena si aan u taageerno macaamiisheenna si ay u horumariyaan ganacsi aad iyo aad u badan suuqooda talaabo talaabo ah. Halkanna waxaan jeclaan lahayn inaan kula wadaagno waxa aan kuu qaban karno, sida soo socota: 1. Taageerada kormeerka warshadaha: Yaasiin, kaliya ma bixinno ...
Soo saaraha ugu sareeya 3 ee Shiinaha ee CAPULE CAAN AH
YASIN GELATIN waa soo saaraha 3-aad ee ugu sareeya china ee 'EMPTY CAPSULE'. Waxaan iskaashi la yeelanay noocyo badan oo caan ah oo caan ku ah dawooyinka oo dhan. Macaamiil badan ayaa ku qanacsan tayadayada sare. Alaabtayada guuleysata waa kaabsal-gelatin iyo (kaab) HMPC kaabsal madhan. Waxaan leenahay abili xoog leh ...
YASIN GELATIN - Soo saaraha xirfadlaha ah ee Paintball Gelatin oo ka yimid Shiinaha
Kubbadda Cagta waa cayaaro caan ka ah adduunka oo dhan. Paintball waa rasaasta loo adeegsado qoriga midabbada ranjiga. Gelatin waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan inta lagu jiro soo saarida kubbadda ranjiga. Qiyaasta gelatin waa 40% -45%. Gelatin lagu dhajiyay ranjiyeynta ayaa ah in la yareeyo xoogga saameynta. Gelatin waxaa loogu talagalay ...
Dammaanad Waqti Gaarsiinta Xasiloon
Waxaan nahay soo saare xirfadle gelatin dawooyin ah in ka badan 35 sano Shiinaha. Haddii aad wax ka hayso arrin ku saabsan waqtiga dhalmada oo aan degganayn, fadlan ka eeg hoosta macluumaadkayaga adiga. Awood bixinta saadaasha-Waxaad alaabtaada ku heli kartaa waqtigeeda xitaa xilliyada ugu sarreysa. Wax soo saarka maalinlaha ah wuxuu gaaraa 8mt ...
Waa maxay Jelly Glue Animal xabagta xabagta?
Waa maxay Jelly Glue Animal xabagta xabagta? 1) JELLY GLUE AMA xayawaannada waa nacasyo ku saleysan biyo. 2) Xabagta xayawaanku waa nooc ka mid ah xabagta borotiinka ee laga sameeyo dhammaan waxyaabaha dabiiciga ah, polymer dabiici ah. 3) Waxay ka soo baxaan kolajka, qayb ka mid ah borotiinka maqaarka iyo unugyada isku xira, pri ...
Sidee ayaan u sameysan kaabsal jilicsan adoo isticmaalaya gelatin?
Si aad u faham fiican uga hesho soosaarka kaabsoolka jilicsan. Halkan waxaan jecelahay inaan ku siino hordhac faahfaahsan sida soo socota: 1. Miisaan alaabta ceyriinka ah iyadoo loo raacayo qaaciddada lagu farsameeyo 2. Ku dar biyo taangiga iyo kuleylka ilaa 70 darajo. ka dibna ku dar glycerin, midab iyo ilaaliyeyaal gelati ah ...
Faa'iidooyinka Gelatin Ee Yaasiin
Sannadahaan kadib cusbooneysiinta tikniyoolajiyadda, tayadeena ayaa aad loo hagaajiyay. Hadda tayadeena waxay haysaa xasillooni iyo heer sare. waxaan u dhoofinay USA, Bangladesh, New Zealand, South Korea, Vietnam, Indonesia, Pakistan, Turkey, iwm macaamiishana way ku qanacsan yihiin ...
Shaxda Flow kaabsal madhan
Yasin company kaabsal madhan oo ku takhasusay kaabsalka madhan ee china.Glad in la ogaado inaad ku jirto kaabsal berrin iyo sumcad sare, waxaan si kal iyo laab ah u rajeyneynaa inaan ka bilowno iskaashigeena isla amarrada muunada ah, Hadday suurogal tahay, shaybaarro ayaa la siin karaa si loo tijaabiyo tayadaada iyo isbarbardhiga. Anaga...
Codsiga Gelatin Fasalka Cunnada
Gelatin Fasalka Cuntada gelatin-cunnada waxay ku kala duwan tahay 80 illaa 280 Bloom. Gelatin waa guud ahaan loo aqoonsan yahay cunto aamin ah. Waxyaabaha ugu fiican ee la jecel yahay ayaa ah astaamaha-dhalaalka-afka iyo awoodda ay u leedahay inay samayso jel-celisyo heerkul-celin ah. Gelatin waa borotiin laga sameeyay parti ...
Waa maxay warshadaha GELATIN (FARSAMADA GELATIN)?
GELATINKA WARSHADA waa hadhuudh khafiif ah, bunni ah ama madow bunni ah, kaas oo dhaafi kara shaandhada heerka 4mm aperture. Waa wax tarjumid ah, jilicsan (markay qallalan tahay), ku dhowaad walax adag oo aan dhadhan lahayn, oo laga soosaaray kolajka ku dhex jira xayawaanka ”maqaarka iyo lafaha. Waa shey kiimiko muhiim ah oo ceyriin ah ...
No.99 ， Channel Pearl Plaza, Wadada Yilan, Degmada Siming, Xiamen, Shiinaha.